USergio Aguero Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts
Ikhaya AMAZIKO EMZANTSI E-AMERICA FOOTBALL Abadlali bebhola baseArgentina USergio Aguero Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Football Genius eyaziwa kakhulu ngeNqampu; 'Kun'. Ibali lethu le-Sergio Aguero yobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela ngexesha lokuzalwa komntwana. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi phambi koBukuthi, Ubomi bentsapho kunye ne-OFF kunye ne-ON-engqinileyo into eyaziwayo ngaye.
USergio Aguero Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Amava okuzalwa
USergio Aguero njengomntwana
USergio Leonel "Kun" uAgüero del Castillo UAgüero wazalelwa eQuilmes, eBuenos Aires ngo-2 Juni 1988 njengomntwana wesibini kwintsapho enkulu kunye nabantwana abasixhenxe. Unina, uAriana, wayengumfazi wendlu, yaye uyise, uLeonel, wayengumqhubi wetekisi. Babeselula bobabini ngaphambi kokuzalwa kwonyana wabo uSergio Leonel "Kun" del Castillo Agüero.
Umkhumbi phambi koSergio Aguero Ukuzalwa
Umama ka-Aguero wayekude nokukhulelwa ngokuthe ngqo naye. Xa umama osemncinci u-Adriana wayekhulelwe inyanga ezintandathu, indlu encinci eyabelana nayo kunye noLeonel del Castillo kunye nentombi yokuqala uJessica kwisithili esingenasiphelo saseGonzás Catan saseBuenos Aires yayisondla kakhulu. Baye baphoqeleka ukuba baphume, baphuma baye emanzini aphantsi nangona imeko yokukhulelwa. Bachitha iholide ezimbini belele kwiimitha zokufunda esikolweni ngaphambi kokuba babuyele ekhaya.
Xa unina wayesekhulelwe umntwana uSergio Agüero, washiya kwisibhedlele kwisibhedlele esihloniphekileyo kwisixeko-dolophu saseBuenos Aires. Ngelishwa, wayenqatshelwe esibhedlele ngenxa yokuba umyeni wakhe wayengakwazi ukuhlawula imali yesibhedlele ngenxa yeengxaki zokukhulelwa kwakhe. Nangona kunjalo, iingcebiso zanikwa kwezinye izibhedlele ezikhoyo eziza kumkela. Emva kokuchaswa esibhedlele esikhulu, zombini izibini zacetyiswa ukuba zivakatye esibhedlele esingachazwanga eLa Matanza, isahlulo sephondo saseBuenos Aires (i-Capital of Argentina). Ngombulelo, emva kokulwa konke, umntwana uSergio Aguero wazalelwa esibhedlele ngomhla we-2nd kaJuni, i-1988 malunga ne-3: 23pm enesisindo se-9.7.
USergio Aguero Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Iingxabano zokuzalwa emva kokuzalwa
Abazali bakaSergio Aguero (uMnu noMnumzane Del Castillo) bafumene ukuba ngabantwana ngabasemagunyeni esibhedlele emva kokuzalwa kwonyana wabo. Yena, kwi-18, kunye ne-Leo, i-19, babekwe njengabantwana kwaye bengatshatanga.
Kulo nqaku, uyise uLeonel Del Castillo wayenqatshelwe ilungelo lokusemthethweni lokusayina irejista yesibhedlele. Nokuba isithuba sokugqibela esinikwe zona asizange senziwe. Akwazanga ukubonelela ngeencwadi zabo zesazisi eziza kunceda imicimbi. Ngelishwa, loxwebhu lwesazisi kazwelonke lwasatshatyalaliswa kwizikhukhula ezabaxosha ekhaya labo lokuqala. Oku kuthetha ukuba unyana wabo akayi kuphendula igama leentsapho 'Del Castillo'. Bobabini abazali kufuneka bafune uncedo omnye umntu eKapa ukumela uyise. Ngoxa wayesayina, 'uSergio' njengegama laye lamkelwa kwaye igama likamama (Aguero) lisetyenziswe kwingxelo esemthethweni. Kuze kube ngumhla, uyaziwa ngeli gama. Ngokungafani nabantakwabo u-Yesica, uGabriela, uMaira, u-Daiana, uMauritius noGaston, wathatha igama lomnina, u-Agüero, kwaye akayi 'Del Castillo' (igama likaBawo).
USergio Aguero Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Ukuqhagamshelana nokuphikisana
Ngethuba lomkhosi wegama likaSergio Aguero, nabazali bakhe babefuna ukupela igama lakhe eliphakathi ngokuthi 'Lionel', kodwa bekunqatshelwe yi-Argentina Registry Regrier Restrictions. Ekugqibeleni bahlala kwigama eliphakathi 'Leonel' apho kubo besisondele 'Lionel'. Kufanelekileyo ukuthetha ukuba ngelo xesha, igama 'Lionel' yayingasamkelwa njengegama labantwana kweso sithili. Lo ngumthetho wanyanzeliswa eRosario, apho omnye wabantu abadala be-Aguero 'uLionel Messi' wazalelwa ngabazali uJorge noCelia Messi.
ULionel Messi, owazalwa ekuqaleni (24 Juni 1987) wayephakathi kwalaba bantu abanelungelo lokuba igama lakhe livunywe nguRhulumente waseRosario.
USergio Aguero Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Imbali emva kweNickname 'KUN'.
Xa uSergio wayeneminyaka eyi-2 ubudala, bathuthela e-Florencio Varela, eningizimu ye-Greater Buenos Aires. Le yilapho intsapho yaseAgüero-Castillo yaba ngabahlobo abasondeleyo nommelwane wabo - uMnu Chetti kunye nosapho. UMnu Jorge Chetti, intloko yendlu, nguye owamnika uSergio isiteketiso esiyaziyo namhlanje.
Umthombo we-moniker yayiyilungu le-animated yaseJapane (okokuqala lathiwa yiWankuku Amukashi Kum Kum) uSergio wayesebenzisa ukubukela kwi-TV yomntu xa eselula. USergio wayethanda ukubukela iindwendwe ze-cave-inkwenkwe yakhe nentsapho yakhe, ehlala phantsi kweNtaba yeMay Kum. Ngokukhawuleza, wayeya kugubha "kum kum" rhoqo, kwaye oko kwakuya kubakho igama lakhe lesiteketiso, ngoku lidumile emhlabeni. Kwaye ke kwaqala amaxesha eKun Agüero.
USergio Aguero uye wathi, "Ndiye ndikhula ukuba ndiyixabise kuba iyingqayizivele. Kunzima ukubona umdlali oniqeshwe ngesiqhelo emva komfanekiso wekhathuni! "
USergio Aguero Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Ulwalamano nabazali.
USergio Aguero noBawo
Uyise ka-Aguero ngumdlali webhola lebhola ngumdlali weqela kodwa iqela alalidlala ngalo ngaphambi kokuthatha umhlala-phantsi engazange lenziwe luluntu. Nguye owaqeqesha u-Aguero omncinane njengoko kuboniswe kumfanekiso ngaphambi kokuba akhule njengenkwenkwezi yebhola yebhola.
USergio Aguero noMama
Ulwalamano olomeleleyo lukhona phakathi kwakhe nomama wakhe.
USergio Aguero Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Ubomi bothando
USergio Aguero kunye nentombi kaGeorge Maradona uGiannina
USergio Agüero watshata nentombi kaGeorge Maradona uGiannina iminyaka emine. Asikwazi ukuba kungani bahlula kwi-2013 kwaye xa uqhawulo lomtshato lugqityiwe, nangona kunjalo. Zayiswa nguGeorge Maradona kwi-2008. Kwaye kubonakala ngathi bawabetha ngokukhawuleza, kuba uSergio Agüero watshata noGiannina Maradonna ngaloo nyaka kunye noonyana wabo uBenjamin wazalelwa kwi-2009.
Nangona kunjalo, ilangabi elivuthayo phakathi kokubini kwimizuzu emibili ngaphandle kwe2012. NgoJanuwari 2013 bobabini bahlukana ngokusemthethweni. USergio wayeyi24 ngelo xesha kunye neGiannina kuphela i-23. Ubutsha babo ngokwabo aluzange lube luhle kumtshato wabo. USergio uye waba ngumdlali webhola ekhatywayo kakhulu kwaye uye wakwazi ukubhiyozela impumelelo kwiqela lakhe laseManchester City. Kodwa uGiannina wayehlala eMadrid, apho uSergio wayedlala khona kwi2011 yeAtletico. Xa wayefudukela eManchester ukuba adlale apho, kuya kubonakala ngathi uGiannina akazange ahambe naye.
Umgama okhulayo phakathi kwabo babini ngokuqinisekileyo wawudumisa umtshato wabo.
Emva kokuqhekeka kwaba yigosa uGiannina wabuyela eBuenos Aires ngokusisigxina. Oko kubonakala kukubethe uSergio kunzima nayiphi na into, kuba wayengenakukwazi ukumbona unyana wakhe uBenjamin, owamkela ngokucacileyo.
Kukhohliswa ukuba ukuhlukana kwaguquka emva kokuba uGiannina washiya uBuenos Aires noGeorge Maradonna baye bavakalisa ukuxhaswa kwintombi yakhe encinci kunye nokunyanzela uSergio. Kodwa ke, ukuthatha intombi yakhe, akunakwenzeka ukumangaliswa. Ekugqibeleni akufanele kube nzima kakhulu kuSergio; emva koko, nguDeorge owazisa ezo zibini.
USergio Aguero kunye noNyana (uBhenjamin)
Le nkwenkwana, uBenjamin Aguero uqale ukubonisa italente yakhe yebhola ngeentsebenzo zakhe ezintle kummandla wokudlala. Wanqoba i-lottery yebhola ye-football. Kwiminyaka emihlanu, uBenjamin sele esenza abanye abantwana bazive bengalunganga ngokungabikho kwebhola.
USergio Aguero noKarina Tejeda (Ex Girl Girl)
USergio akazange athathe ixesha elide ngaphambi kokuba ahambe, nangona wayebuhlungu ngenxa yokulahleka unyana wakhe. Ngokukhawuleza wabonwa ngaphandle ne-Argentinean cumbia singer uKarina Tejeda kwaye babika ukuba babedlelane kude kube kutshanje.
Bobabini kunye nentombi yakhe ibonakala ngokukhazimulayo kunye kunye. Zihlala zibonakala kwaye ziphawulwe kwiindawo zoluntu. Awukho na iindlebe malunga nomtshato wabo.
Uthando lukaSergio Aguero, uToni Duggan
Kodwa ngoku kuthiwa uye wahlula kuye kwaye uye wadibaniswa noToni Duggan, odlala kwiqela le-female FC yaseManchester City. Ziye zabonwa kunye kunye nezikhundla ezisemthethweni.
USergio Aguero noToni Duggan
Iingxelo ziye zavela eArgentina zathi uDuggan wayenebudlelwane noMdlali we-City uAguero, kodwa uDuggan uthathe i-Twitter ukuba aphike amabango, achaza "njengengcikivo".
Nangona kukho ukuphika, umboniso othile weTV ku-Argentina waseAguero uhlala unomkhuba wokuba ulwalamane nolwalamano lwabo.
USergio Aguero Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Feud kunye noMarcos Rojo
USergio Aguero Feud kunye noMarcos Rojo
Ukuxhalaba phakathi kukaSergio Aguero noMarcos Rojo kwakusoloko kwenzeka ngobusuku be-Manchester derby. Ienkwenkwezi zaseArgentina zijongene nobuso kwi-Etihad ngeengxaki ezintathu kuphela kodwa inqaku elidala liza kulungiswa.
Lo mbhangqwana waba nomgca wokutshisa ngexesha leNdebe yeHlabathi xa uRojo emema umyeni owayengumfana we-Aguero, uKarina Tejeda, egumbini lokugqoka lase-Argentina ukugubha ukunqoba kweNigeria.
Qaphela: UAguero waqala ukutshata noKarina emva komtshato wakhe nentombi kaGeorge Maradona, uGiannina, waphula iminyaka emibili edlulileyo.
USergio Aguero Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Ibhola liqalise njani
Yeyiphi ibhola eyaqalisa uSergio Aguero
Kwi-1991, xa uSergio eneminyaka emithathu ubudala, intsapho yakhe yafudukela kwindlu encinane, elula nje ngaphandle kweLos Eucaliptus, indawo enqamle kwizithili zaseQuilmes naseBernal. Le ngxowa yezindlu ezihluphekileyo yayincinci xa kuthelekiswa namanye amadolophu afana neGreater Buenos Aires, kodwa yayineenqwelo ezintathu ezingenanto ezikhethwe njengeendawo zebhola zedolophu. Abemi, abancinci nabasemdala, baqokelele kula maqashiso ukuba badlale ixesha elide. Kwakule mihlaba uSergio waqala ukubonakalisa iimpawu ze talente yakhe ngebhola - njengoko iminyaka ihamba, yayiza kubonakala ngokucacileyo.
USergio Aguero ekuqaleni kwebhola
Ngaphantsi kwe-Leonels iso elijongene neliso kunye no-Adriana ngokugxininisa kwiimbuyekezo kunye nezohlwayo, uSergio wajoyina amaqela akhe okuqala asemacaleni ekhatywayo ahlukeneyo aseBuenos Aires-ehla ngendlela efanayo uyise awayeyinyathele yona esemncinci, eTucuman. Wenza ngokugqithiseleyo kwiihambo ezintlanu ngeendlela kunye nokuthiwa "insimu yokungcola" ibhola lebhola, ukubhalisa kwinkqubo encinane yeeklabhu ezininzi - uLoma Alegre, 1 de Mayo, 20 de Junio, uPellerano Rojo, iBristol kunye neLos Primos. Wayeyingxenye yaloo mbonakalo enkulu yeetalente ezisezidolophini zaseBuenos Aires ziba njalo ngeveki, kunye namawaka abantwana abajolise ukuphumelela iikhokhamnethi zonyaka ezikhuphisana kakhulu.
Ulutsha uSergio Aguero (Ukwazi ubugcisa bebhola)
U-Kun wayekwazi ukwenza igama lakhe njengomdlali onobuchule noqhaqhaqhayo kule mikhuphiswano, ebeka ingqalelo kwii-scouts ezazibona ikamva elihle kwiCandelo Lokuqala phambi kwakhe. Kwi-2005, unyaka kunye nesiqingatha kamva, uSergio wayeqhele rhoqo kwiqela le-Independiente. Ukusebenza kwakhe okuvelele kwamenza indawo kwiqela lase-Argentina le-U-20, nangona i-3 iminyaka engaphantsi kwesikhephe.
USergio Aguero, uhlalutya nabazali
USergio wawaphumelela iNdebe yeHlabathi ye-U-20 eyayiqhutywa yiNetherlands. Oku wayegubha nentsapho yakhe. Umdlalo wokugqibela weNigeria wagqiba isigwebo esinikwe uSergio kwaye ulandelwa nguLionel Messi. UKun wazinikezela intsindiso yakhe kumhlobo wakhe u-Emiliano Molina, owayedlala nayo yonke ixesha lakhe kwi-system ye-Independiente yolutsha kwaye wafa ngengozi yemoto ngexesha leNdebe yeHlabathi.
Kungekudala emva kokubuyela eArgentina, naye wakhetha ukuzinikela kwinkumbulo yabangani bakhe inkolelo enkulu kwi-derby ngokumelene neRadio de Avellaneda, apho iKin iphumele khona injongo eya kuhlala kwiingxelo zebhola le-Argentina.
Kun, iminyaka eyi-17 ubudala kodwa isele isithixo sezihlwele, kwafuneka ihluke kwiqela lakhe elithandayo kwi2006 xa idluliselwa e-Atlético Madrid nge-23 yezigidi ze-euro-Eminye imbali.
USergio Aguero Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -imoto
Lamborgini kaSergio Aguero
I-Aguero isebenzisa iHuracan - imoto yemidlalo eyenziwe yi-Lamborgini. Kuqikelelwa ukuba ufanele i-$ 160,000.00 (One One hundred and Sixty Thousand Dollars).
Umbono opheleleyo we-Lamborgini kaSergio Aguero
USergio Aguero Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Ucelomngeni uNico Rosberg ukuphumelela i-PUMA Race Challenge
USergio Aguero umngeni uNico Rosberg ukuphumelela inselele yePUMA Race Challenge
Umdlali webhola yaseArgentina kunye ne-Manchester City wabuyela kwi-Circuit Circuit yaseDonington Park e-UK apho wafumana isifundo sikaNico Rosberg, ngaphambi kokubeka italente yakhe ukuvavanya kwimizila emotweni yemoto yeMercedes C 63 AMG. Wayehamba ngeenxa zonke, ebeka izihlandlo ezithandekayo kakhulu, ebonisa ukuba iinyawo zakhe zisebenza ngokubanzi malunga neepedals njengoko zenza kwibala lebhola. Ngokungafuni ukukhishwa ngaphandle, umqhubi we-Formula 1 waseJamani wanika u-Aguero uhambo lwakhe lobomi kwimoto yeMercedes DTM.
USergio Aguero Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Tatoo Facts.
USergio Aguero Tatoo inyaniso
U-Agüero une tattoo ngaphakathi kwengalo yakhe yokunene ebhalwe kuyo Tengwar- uhlobo lokubhala olwenziwe ngulo JRR Tolkien in INkosi yamaRandi-kuguqulela ngokukhawuleza Kun Agüero kwiilatfabhethi zesiLatini. Kananjalo unesitampu kwisandla sakhe sekhohlo segama lonyana wakhe kunye nomhla wokuzalwa. (Bona ngezantsi).
USergio Aguero Tatoos kunye nenjongo yawo
USergio Aguero Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -ISoka leSikolo lixhomekeke kuSergio Aguero Haircut.
ISoka leSikolo lixhomekeke kuSergio Aguero Haircut.
Umntwana wayevaliwe ukusuka esiklasini ngesikolo sakhe ngenxa yokuba wayenentloko ephefumlelwe ngamakhwenkwe akhe. Wayelelwa ukuba ahlale ekhaya ade abuyele, intsapho yakhe yathi.
Umntu oneminyaka elishumi ubudala uTom Moseley watshelwa ukuba abuyele emfutshane kunye neentambo zekhanda, eboniswe ngombono womdlali waseManchester City. Wasuswa esikolweni ngomhla wokuzalwa kwakhe.
I-Atletico Madrid yeDlalo
I-Eric Garcia Ibali loBuntwana leNqaku leNqaku leNgcaciso yeBantwana yeNqaku
Umhla oLungisiweyo: nge-18 kaSeptemba ngo-2020
IJackie Milner Ibali leBantwana leNkcazelo ye-Untold Biography Facts
I-Toby Alderweireld Ibali leBantwana kunye neNgcaciso ye-Biography Facts
ULoyoy Sane Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts